गोपाल पराजुलीलाई सांसदहरुको प्रश्न र उनको जवाफ-NepalKanoon.com
गोपाल पराजुलीलाई सांसदहरुको प्रश्न र उनको जवाफ
जेठ ९, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा सिफारिस गरिएका आठ जना न्यायाधीशहरुको सुनुवाई भइरहेको छ। शुक्रबार दिउँसो गोपाल पराजुलीको सुनुवाई भइरहेको छ। अहिले सांसदहरुले उनलाई प्रश्न गरिरहेका छन्।
के प्रश्न गरिरहेका छन् सांसदहरुले पराजुलीलाई? हेर्नोस्, जस्ताको तस्तै।
म चारवटा विवाहको कुरा गर्दिन। २१ वटा उजुरी हेर्दा अधिकांश उजुरीको स्वरुप र घटना आर्थिक चलखेलमै केन्द्रीत भएर गरेका देखिन्छन्। यसबारे जताततै चर्चा छ कि सेटिङ मिलाएर फैसला गर्ने कुरा पनि छ। तपाईँ स्थायी र प्रधानन्यायधीश हुने व्यक्तिले सर्वोच्चमा कानुनका खरिद बिक्री हुँदैन भन्ने विश्वास गर्ने? २१ दिनको फरकमा ७० फागुन ९ गते र २८ गते अर्को हाइडो पावरमा फरकफरक आदेश दिनुभएको छ। यसबारे आर्थिक चलखेल नभए के?
गोपाल पराजुलीले दिए सभासद्हरुलाई जवाफ:
बादेबादे तत्वबोध भनेजस्तै, तातोपानीले आगो लगाउँदैन। मेरो बारेमा उठेको चारित्रिक प्रश्नको बारेमा मेरा वचन र शब्दहरु र मेरा अभिव्यक्तिहरु झुटो भएमा तपाईँहरुले न्याय गरे हुन्छ।
मेरो जीवन कष्टप्रद छ। म राजनीतिक व्यक्ति हुँदा कष्टप्रद थियो। परिवार विखण्डित भयो। श्रीमती मरेपछि मलाई पत्रकारले लेख्दा सोधेर लेखेको भए म धन्य हुन्थेँ। यस्तो झुठो कुरा कसैले सहन सक्दैन। केजरीवाल अहिले जेलमा छन् भने यहाँ पनि त्यो बुझेको भए हुन्थ्यो। तर, मैले मेरो श्रीमती दुर्घटनामा परेपछि दोस्रो विवाह गरेँ। मलाई पटकपटक अराष्ट्रिय भनी सम्बन्ध विच्छेद गराइयो। मैले भनेको गलत भए म प्रमाण दिन तयार छु। मलाई प्रायश्चित होइन, म उजागर भएको छु। मैले यो देशमा लोकतन्त्र, विधिको शासनका लागि धेरै काम गरेको छु। मेरो मानवअधिकार र विधिको शासनप्रति समर्पण छ।
मैले कानुनको प्रतिकूल काम गरेको छैन। त्यो पुष्टि भए सर्वोच्चले नै निकाल्छ गलत्याउँछ। मैले २३ वर्षको बलिदानी कार्यले यो पद पाएको हो।
प्रकाश वस्तीको कुरा मेरो क्षेत्राधिकार बाहिरको हो।
कस्तो विवाद हो? मैले १५ हजार फैसला गरेँ होला। तर त्यसको बारेमा मैले कुनै त्यस्तो गैरकानुनी गरेको छैन। पोखरामा छँदा मैले १ सय ९१ रोपनी सार्वजनिक जग्गा बचाएको थिएँ।
आत्मरतिपूर्ण प्रश्नको बारेमा क्षमा चाहन्छु। कसैको पनि चरित्रको बारेमा कुरा गर्दा प्रमाण बिना गर्नु हुँदैन।
तपाईँहरु साच्चै सिरियस भए मैले भूपू न्यायाधीशको मुद्दामा मैले जुन फैसला गरेँ, त्यसले उहाले सधै मेरो खेदो गरिरहनुभयो। उहाले ऐरेगैरे नत्थु खैरे भनी क्षेत्राधिकारको प्रतिकूल गर्नुभयो। मलाई कसैले अन्याय गर्दा मैले भोलि न्याय पाउँला? उहाँले आफ्नो शेयर भएको पत्रिकामा समाचार भनी प्रकाशित गरेपछि मेरो बारेमा यो उजुरी आयो।
उद्धव केसीद्धारा सेतोपाटी अनलाइनमा हुने नहुने कुरा आएको छ। मेरो बारेमा उद्धव केसीले जुन उजुरी गरेका छन्, मान्छे जीवित भएकाले मैले फैसला गरेको हो।
किरणसिँह बस्नेतको कुरामा म महिलाप्रति सम्बेदनशील व्यक्ति हुँ। हाम्रा फैसला कानुनका आधारमा गरिन्छ।
विचाराधीन मुद्दाको बारेमा मैले बोल्न मिल्दैन। परिषद्ले स्पष्टीकरण दिएको छ। विराटनगरमा विदाइ नपाएको कुरा कानुनको कुरा होइन। विदाइको कुरा गर्नुहुन्छ भने ३० किलोको माला छ म चाहे देखाउन सक्छु।
म आत्मपरक उजुरी भन्छु। रेखादेवीको बारेमा कुरा गर्दा मैले अहिले सम्म आमा बाबुको सम्पति छोराछोरीले माग गरे निजी भन्न पाउँदैनन्। जसले भनेको छ उसले प्रमाण ल्याए भनौँला।
मुद्दाहरुको बाणिज्य इजलासको बारेमा पनि पत्रपत्रिकाले राम्रो गरेको भन्ने आएको थियो। म यो फैसला हुँदा सायद गोरखा गएको थिए। पोखरा फुलबारीले लिएको जग्गा सार्वजनिक भनेको थिएँ।
म यो पदमा आउनु भन्दा पहिला मसग रिगरोड र महाराजगञ्जको जग्गा अहिले छैन। मेरो सम्पति बारे झिकाएर हेरे हुन्छ।
उद्धव केसीको उजुरीमा उनले श्रीमतीसँगको डिभोर्स केसबारे सिडिओ कार्यालबाट नभएपछि मकहाँ आएपछि मैले कानुन बमोजिम गरेको हो।
न्यायपरिषद् ऐनमा कुनै पनि न्यायाधीशले दुई वर्षको एकपटक सम्पति विवरण बुझाउने व्यवस्था छ त्यसको मोनिटरिङ गर्ने व्यवस्था भए धेरै हदसम्म नियन्त्रण हुन्छ।
भ्रष्टाचारको बारेमा नातावाद कृपावाद हिजो पनि थियो आज पनि छ त्यसको अन्त्यभन्दा न्यूनीकरण गर्नुपर्छ। हामीकहाँ भ्रष्टाचार बारे हेर्ने निकाय छ। व्यक्तिपरक अपराधमा म संलग्न छैन। सबै उच्च ओहोदामा बस्ने सबैको सम्पत्ति विवरण हेर्नु पर्छ। अहिले पनि अदालतका कर्मचारीको जीवन शैली हेरे सबै थाहा हुन्छ।
मलाई एन्टिलेफ्ट भनी भन्नुभयो। म जन्म नै गणतन्त्रवादी थिएँ भने म कसरी त्यो भए होला? ६२ सालमा म महेन्दनगरमा गएर १ सय २३ बन्दी राजनीतिककर्मीलाई छुटाउन एडभोकेसी फोरम मार्फत गएर हातहतियार सुसज्जित कार्यक्रममा गएर पछि छुटाएँ। यो मेरो गणतन्त्रप्रतिको प्रतिवद्धताले हो। सार्वजनिक अपराधमा माओवादीलाइ जसरी पनि थुन्नु पर्छ भनी डडेलधुराको जोगबुढामा झडप भएको भन्दै मुद्दा आयो। उनीहरुको बारेमा किर्ते मुद्दा देखेपछि न्यायलाई कानुन र दसीले दिवंगत गर्नु हुँदैन। म कुन पक्षको?
मलाइ कुनै विरोधी भनी कल्पना नगरे पनि हुन्छ।
सार्क सम्मेलनमा राष्ट्रपति गयुम नेपालमा आएर सोल्टी होटलमा राख्ने कुरामा सोल्टीका मजदुरले आन्दोलन गरे र उनीहरु निकालिँदा मैले पुनर्स्थापित गरेको छु।
कहिले एमाले समर्थक कहिले माओवादी समर्थक भएको छु। आक्रोश पनि प्रमाण नभई गर्नु हुँदैन। तपाईँहरु आशंकित र आक्रोशित हुनुहुन्छ। तर त्यो हुनु हुँदैन। मैले सबैको जवाफ दिन सकेँ कि सकिँन थाहा छैन।
धेरै काम गरिरहेने मान्छेलाई विवाद आउँछ।
मैले न्यायाधीश भएपछि ७ पटक पाटनमा बसेको छु। वरिष्ठहरुका फैसला उल्टिए पनि मेरो सदर बदर भएको छ उल्टिएको छैन।
मैले कति थुनेको थिए, कति छाडेँ थाहा भएन। मैले सर्वाधिक फैसला गरेको छु। यहा सारविहिन संख्या मात्रै उजुरी आएको छ। मकै गोड्दा ठूलो घोगा लाग्न बोट हल्लाएजस्तै यहाँ हल्लाएको होला।
मान्छे जहिले पनि सेन्ट्रिक छ। मान्छेको उत्पतिदेखि नै त्यही भएको छ।
म त सर्वोच्च अदालतमा बसिसकेको हुँदा अब संविधान बनाउँदा तपाईँहरुले जस्तो संविधान र कानुन बनाउनु हुन्छ, त्यही अनुसारको न्यायालय हुन्छ। स्वतन्त्र न्यायालय बनाउनु पर्छ।
यति भनेपछि अब धेरै ओठ बझाइरहनुपर्ने जस्तो लाग्दैन। setopaty.com